Soomaalida Falköping oo loo sheegay in ay isagabaxaan Sweden | Somaliska
Ku dhawaad 30 qof oo ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Falköping ayaa helay fariimo sms ah oo ay ku qorantahay in ay boorsooyinkooda qaataan oo Sweden isaga baxaan, ayadoo fariinta ay ku saxiixnaayeen magaca xisbiga cunsuriga ee Sverige Demokraterna (SD) balse xisbiga ayaa iska fogeeyay in ay ayagu soo direen fariinta. Agaasimaha xisbiga SD ee magaalada Falköping Hanna Wigh ayaa sheegtay in aysan fahansaneen sida wax u dheceen ayadoo iska fogeysay masuuliyada arintaan. Booliska Falköping ayaa ku wargaliyay dadka in ay la soo xiriiraan booliiska haddii ay helaan fariimo nuucaan oo kale ah, ayadoo dambi lagu soo oogi karo cidii ka dambeysay arintaan. Balse booliiska ayaa sheegay in aysan wax dacwo ah ilaa hada soo gaarin. Xigasho: DAGEN
Ku dhawaad 30 qof oo ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Falköping ayaa helay fariimo sms ah oo ay ku qorantahay in ay boorsooyinkooda qaataan oo Sweden isaga baxaan, ayadoo fariinta ay ku saxiixnaayeen magaca xisbiga cunsuriga ee Sverige Demokraterna (SD) balse xisbiga ayaa iska fogeeyay in ay ayagu soo direen fariinta.
Agaasimaha xisbiga SD ee magaalada Falköping Hanna Wigh ayaa sheegtay in aysan fahansaneen sida wax u dheceen ayadoo iska fogeysay masuuliyada arintaan.
Booliska Falköping ayaa ku wargaliyay dadka in ay la soo xiriiraan booliiska haddii ay helaan fariimo nuucaan oo kale ah, ayadoo dambi lagu soo oogi karo cidii ka dambeysay arintaan. Balse booliiska ayaa sheegay in aysan wax dacwo ah ilaa hada soo gaarin.